Kuze kube muva nje, komthombo ukukhanya efulethini kwaba Iqhwa, etholakala maphakathi ophahleni kuphela. Kamuva, kwakukhona sconces nenhle. Kodwa izimfuneko ukuklanywa ukukhethwa ukukhanyisa kancane kancane anda. Namuhla isinqumo sokuthi leli gumbi laba nje okungenani amabili (i-bezitshela ukuthi kungcono) umthombo wokukhanya. Kunezinhlobo ezahlukene sezibani: phansi, ophahleni kanye udonga. ukukhiqizwa yabo isebenzisa ezihlukahlukene izinto, kuhlanganise metal, izinkuni kanye namabhodlela.
Sinesithakazelo phezulu spotlight, senzelwe ophahleni imisiwe. Ngosizo lwabo, ungakwazi ukuhlola ngezithombe egumbini ukukhanyisa. Igama elithi "ichashazi" ngenxa yokuthi ukuze imishayo ukukhanya abe ukusabalala engela encane ukhanyisa kuphela ingxenye ebusweni. Ukuze sifinyelele ukukhanya umfaniswano lonke igumbi ukukhanyisa iphuzu kumelwe ibekwe emhlabeni azungezwe ophahleni. Ungakhetha endaweni ethile isikhala, ngokusebenzisa isimiso zalapho esakhelwe ngaphakathi. Ukuze uhlelo ngalunye, inkinobho ehlukile. Kukholakala ukuthi they are kasibili asihambisani kokukhanyisa izindawo ezinkulu kanye emagcekeni ejele. Nokho, kukhona izibani lisetshenziswe inhlanganisela ezahlukene kanye inhlanganisela. Uma kuziwa ukukhanyisa mpo, kumelwe nakanjani abandayo kanye ngingekho ovulekile. Lokhu kungafezwa ngokubheja isibani compact azungezwe engenhla egumbini. Umgomo we operation ye emithonjeni efana kanje. Iqiniso ukuthi zibonisa ukukhanya ophahleni, abese elinika emuva kuye kakhulu. Ngenxa yalokho, umuzwa wokuthanda izinto obala kanye ikamelo weightlessness.
Izibani for spotlight ezahlukene ukuphila isikhathi eside, kodwa uma kunesidingo bangakwazi kalula ushintshe. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa amathuluzi ube kunoma yiluphi ekhaya. Nge ilungiselelo ofanele izibani, ungakha nangezindlela kunesidingo, kanye ukufeza ukulungiswa egumbini geometry. Ngokwesibonelo, uma ufuna ukuya khona kancane okwengeziwe umhubhe eside phakathi ekhishini nasephasishi, ke lokhu kufanele afakwe ophahleni zalapho iphuzu. Sinenkosi ukuya ngisho eduze. Futhi uma uyibeke emhlabeni azungezwe egumbini, ungenza kokukhulisa ezibukwayo.
Mangisho ukuthi zonke izibani iphuzu siwukuthi kuyafaneleka ukusebenzisa ngokuba izibani ekudwetshweni eziphilayo. Ukuze amahhovisi ekhaya futhi namahhovisi kangcono izinhlelo Modular. Bona uvumelane ngokuphelele endaweni elingaphakathi yesimanje.
Yakhelwe isakhiwo, ehlanganisa amamojuli ezimbalwa ezikuvumela ukudala ukukhanyisa oqondile. Bona zingafakwa kuphi ku cassette noma ophahleni Tile. Izinzuzo ohlelweni Modular yilezi: kalula ukufakwa, lula ukusetshenziswa, ukusebenza kanye liyasiza. Ziyakwazi ekahle ezinkulu yokuthengisa izindawo, izitolo, amahhotela, amabhange, izikole kanye namahhovisi.
Kukhethwa kwesokudla ukukhanyisa akukhona ukuthi kubaluleke kuphela ukudala indawo ukhululekile, kodwa nezalo impilo iso.
Amakilasi ngokunemba sokulinganisa izindlela. NeKwakha wokulinganisa amadivaysi. isigaba 5 ukunemba
Smooth isiqalo lokungeniswa motor: idivayisi, isifunda